Nbudata Dassault Falcon 20E FSX & P3D - Rikoooo
downloads 8 574
Nleputa ihe nlere na nlele site na Arild Elverum (Rotorhub). Textures na Mods nke Thomas Roehl dere.
Emelitere na 26 / 08 / 2019: Xdị 2.0. Ihe ngwugwu ohuru nke ejiri Falcon 20 / 200 / HU25. Agụnyere bụ Njem Ndị njem, Ibu, ECM MIL, agha elektrọnik, getchekwa gburugburu, Nnyocha ikuku, MIT Electronics Research, ụdị Guardian USCG. Dịkarịa ala 16 ụdị dị iche iche na ndoghachi 23. Lee akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ntuziaka PDF (Pilot Notes) maka nkọwa ndị ọzọ
Ihe ngwugwu a bu ihe nlere poly nke di ala maka imuta ihe abughi ihe ngosi. Agbanyeghị, onye edemede ahụ nwalere ime ka o zie ezi dịka o kwere mee n'ime ihe omuma ya na ike ya ugbu a gbasara FSX/P3D mmepe. Ọ na-eji naanị ọkọlọtọ FSX/P3D Ọrụ SDK. Lee akwụkwọ ntuziaka PDF (Pilot Notes) maka nkọwa ndị ọzọ.
Dandault Falcon 20 bu uzo azụmahịa nke French nke Dassault Aviation mere. Akpa azụmahịa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara wee bụrụ onye mbụ nke ezinụlọ nke jets azụmahịa ka a ga-emepụta n'okpuru otu aha ahụ. Ma obere Falcon 10 na onye ka ukwuu Falcon 50 bụ ihe ndị na-emepụta nke Falcon 20. Anwụrụ 20 Ụgha, nke a maara dị ka Dassault-Breguet Mystère 20, ka akwadoro mmepe nke ụgbọelu n'oge December 1961. Ọ bụ mpempe nkuzi dị ala, nke a na-ejikọta General Electric CF700 turbojet engines. Na 4 May 1963, prototype mere ụgbọ elu ya. E webatara ụgbọ elu mbụ na 3 June 1965. (Isi na Wikipedia)
Onye edemede: Ihe nlere na nlele sitere na Arild Elverum (Rotorhub). Textures na Mods nke Thomas Roehl dere.
Ọnọdụ Ngagharị F-111 PIG HUD FSX & P3D